မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ: July 2008
Uni Mon နှင့် Zawgyi - One
အွန်လိုင်းပေါ်ကို မွန်လူမျိုးတွေအများကြီးရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဘလော့လောကမှာလည်း မွန်ဘလော့ဂါတွေ နေစဉ်နှင့်အမျှတိုးပွားနေပါတယ်။ ဘလော့တွေမှာ အဓိက ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက ဖောင့် (font)မမြင်ရခြင်းပါပဲ။
ကျနော်ဒီပိုစ့်ကိုရေးသားရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယူနီမွန်ဖောင့် အကြောင်းကို အနည်းငယ်တင်ပြရင်းနဲ့ ဇော်ဂျီဝမ်းနဲ့ ဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲကို ကျနော်သိသလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘလော့မှာ ဖောင့်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိပ်မသိရှိသေးတဲ့ မွန်ဘလော့ဂါများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သိကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဘလော့ဂါများ အနေနဲ့ ဒီပိုစ့်နဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော်ရဲ့ အားနည်းချက်များကို ထောက်ပြစေချင်ပါတယ်။
ယူနီမွန်ဖောင့်ကို ယူနီကုဒ်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာပြီး မွန်လူမျိုး ကွန်ပြူတာပညာရှင်တစ်ယောက်က ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ယူနီမွန် keyboard driver ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မွန်စာရော ဗမာစာပါရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဗမာစာကို ဇော်ဂျီဝမ်းဖောင့်ဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ အခု ကျနော့်စက်မှာ ယူနီမွန် keyboard driver ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဇော်ဂျီဝမ်းဖောင့်ကိုပါ ကျနော် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘလော့တစ်ခုမှာ မွန်စာကို ယူနီမွန်နဲ့ရေးပြီး ဗမာစာကို ဇော်ဂျီဝမ်းနဲ့ရေးချင်ရင်တော့ ယူနီမွန် keyboard driver ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ဖောင့်များကိုတော့ အောက်ပါအတိုင်းကြော်ငြာပေးရပါလိမ့်မယ်။
default="normal normal 100% Uni Mon, Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 200% Uni Mon, Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 100% Uni Mon, Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 135% Uni Mon, Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
ကျနော်တို့ ပုံမှန်ရေးသားချင်တဲ့ ဖောင့်ကို % နဲ့ ကပ်ရပ်ထားပြီး နောက်ထပ်ဖောင့်ကိုတော့ ဒုတိယနေရာမှာ ထားပေးရပါမယ်။
ဥပမာ-- ကျနော်တို့ ယူနီမွန်ဖောင့်ကို % နဲ့ ကပ်ရပ်ထားလိုက်ရင် ကျနော်တို့ ယူနီမွန်ဖောင့်နဲ့ ပိုစ့်တင်တဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ယူနီမွန်ဖောင့်နဲ့စာရိုက်ပြီး တင်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒုတိယနေရာမှာထား ထားတဲ့ ဇော်ဂျီဝမ်းဖောင့်နဲ့ ပိုစ့်တင်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ရပါမယ်။
ဇော်ဂျီဝမ်းဖောင့်နဲ့ စာရိုက်ပြီး ပိုစ့်တင်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ ဖောင့်ထပ်ကြော်ငြာ်ပေးရပါမယ်။
<font-family:"Zawgyi-One;"> ရေးသားလိုသည့်စာ </font>
Uni Mon >> font > keyboard diver > keyboard Layout တွေကိုလိုချင်ရင်တော့ ကျနော်ရဲ့ ဘယ်ဘက် ဆိုဒ်ဘားမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကဲ့ ကျနော်သိသလောက် မှတ်သလောက်မျှဝေလိုက်တာပါ။ ဘလော့မှာ မွန်စာရော ဗမာစာပါ ရေးသားတင်ပို့ရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ. . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:19 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
မွဲအခိင်တေံလေ၀် . . .
သြ၀် . . . .
ဆပ်ဗစာရောင်စိုအ် . . . .
ကျနော်ရဲ့မွန်ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်အင်မတန်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ(ကျနော်ရေးထားလို့:P)။ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော် ရှင်းပြပါမယ် ``အရင်တစ်ချိန်က လမင်းကြီး ထွန်းလင်းလို့ သာယာခဲ့ဖူးတယ် ... တိမ်တွေဖုံးလို့ ထွန်းလင်းနေတဲ့လမင်းကို မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး မှောင်မိုက်ပျင်းရိစရာ ကောင်းပါတယ် ... လမင်းကြီးနောက်ထပ် ထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ထိုင်စောင့်နေမှာလား ကြိုးစားရုန်းကန်ယူမလား စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့´´ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ကျနော့်မိဘဖိုးဖွားတွေက မွန်စစ်စစ်တွေဖြစ်လို့ ကျနော်ကမွန်သွေးစစ်တဲ့မွန်လူမျိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့မိခင်ဘာသာကတော့ မွန်ဘာသာပေါ့။ တစ်ခုလောက်တော့ဝန်ခံချင်ပါတယ်။ ကျနော်က မွန်လူမျိုး စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် မွန်စာကို ကောင်းကောင်းမတတ်ပါဘူး။ မွန်စာကို ဗမာစာလောက် ကျနော် မကျွမ်းကျင်ပါဘူး။ ရီစရာများဖြစ်နေမလား . . . မွန်လူမျိုးတစ်ယောက်က ကိုယ့်စာကိုတော့ မကျွမ်းကျင်ဘူး သူများစာကိုကျတော့ ကျွမ်းကျင်နေတယ်။ ကျနော်တစ်ယောက်တည်း ဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မွန်လူမျိုး အတော်တော်များများ အဲဒီလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မတတ်တာလဲ။ ရှင်းပါတယ် မသင်လို့ပေါ့ဗျာ။ ဒီပညာတွေက မွေးရာပါတတ်လာတဲ့ပညာတွေမှ မဟုတ်တာ သင်မှတတ်မှာပေါ့။ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာကို မသင်ဘူးဆိုတော့ မွန်လူမျိုးတွေ ပျင်းနေတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ မေးကြည့်လိုက်ပါ စာဖတ်သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ မွန်စာမတတ်တဲ့ မွန်လူမျိုးတွေကို
`` မွန်စာမသင်ချင်ဘူးလား?´´ လို့။ သင်ချင်ကြပါတယ် မတတ်ဘူးဆိုတာကလည်း သင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေ မရခဲ့ကြလို့ပါ။
မွန်စာတတ်တဲ့မွန်လူမျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ မွန်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့။ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်း မွန်စာက အခုထိရှင်သန်နေတာပါ။ ကျနော်လည်း အထက်ပါကဗျာကို ရေးသားနိုင်ဖို့ ကိုရင်ဝတ်ပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မွန်စာသင်ရပါတယ်။ မွန်စာသင်ဖို့အတွက် ကျနော်ဒုတိယအကြိမ် ကိုရင်ဝတ်ရပါတယ်။ ကဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ . . . ကိုယ့်ဘာသာစာပေကိုသင်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးဝတ်နေရသေးတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ဗမာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ မွန်လူငယ်ကျောင်းသားတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး မွန်စာသင်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့မွန်အခေါ် ``ဘာဥတုကညင်´´ နွေရာသီမွန်စာသင်ကျောင်းပေါ့။ ဘုန်းကြီးတွေ မွန်စာတတ်တဲ့ လူကြီးတွေ အခမဲ့သင်ပေးကြပါတယ်။ တစ်ခြားဘာသာတွေကို သင်လို့အားတဲ့အချိန်တွေမှ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာကိုသင်ရတာ သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာလည်း နွေရာသီမွန်စာသင်ကျောင်းကို မွန်ကျေးရွာတွေမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကျောင်းတွေဖြင့် မွန်စာပေဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေမှာ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေနည်းပါးနေပါတယ်။ အဲနောက်တော့ မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ မွန်ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်ကိုလည်း အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်လို့ ပြောင်းလိုက်သေးတယ်။ ရှိပါသေးတယ် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို မွန်ပြည်နယ်နေ့ဆိုပြီး မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်မှာ ပါခဲ့ပါသေးတယ်။ သံလွင်တံတား အ၀င်ဝ အ၀ိုင်းမှာရှိတဲ့ ဟသာင်္ရုပ်တုကို ဗေဒင်အရ ဆွမ်းအုပ်ပုံပြောင်း လိုက်ပါ သေးတယ်လေ။ အဲဒါတောင် န အ ဖ အစိုးရက ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုပဲ။
မွန်လူမျိုးတိုင်း မွန်စာမတတ်နိုင်ကြပေမယ့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တတ်သင့်ပါတယ်။ မွန်စာသင်ခွင့်လည်း လွတ်တ်လပ်လပ်ရှိသင့်ပါတယ်။ လူမျိုးတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသင့်တယ်လို့ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ မထင်ဘူးလား။
လူမျိုးတစ်မျိုးမှာ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါတွေသာ မရှိတော့ရင် အဲဒီလူမျိုး အနှေးနဲ့အမြန် ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူမျိုးရဲ့ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျောက်ကွယ်မသွားအောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရင်း . . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:21 PM 20 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
အချစ် + ကျနော် + နှုတ်ဆက်ခြင်း
နေ့လေးတစ်နေ့မှာ . . .
အချစ်လောကနဲ့ . . .
နေ့တစ်နေ့မှာ . . .
သံသရာထဲဝယ်. . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:43 PM3ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်